Floor Lamp, Table Lamp, Lamp Shade, nitondra adaptatera, talantalana Floor Lamp - tsara
Talantalana Floor Lamp
USB Table jiro
1-5W LED adaptatera
6-12W LED adaptatera
18-24W LED adaptatera
Hanazava ny anatiny miaraka amin'ny miavaka, endrika Metal gorodona jiro. Mampiditra lafo vidy ho zorony sy alcoves, na afa-mandositra ny Cozy, famakiana rivotra takona. Mijery ny famokarana ny ankehitriny sy ny nentim-paharazana jiro, avy domed vy teti-dratsy sy ny lela fanaovan-jiro Maraokana-ara-tsindrimandry, ny tsara tarehy Metal jiro isa ary olona lava marotsaka fomba.
Avo amin'ny fomba fanoratra, Tripod avy hatrany tany jiro manampy classiness ny toerana misy! Asongadin'ireny-joron-trano na toerana iray afa-tsy ny ambony seza tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ho Cozy koa. Ataovy an-trano Cozy amin'ny mamirapiratra vahaolana avy amin'ny jiro tsara fanangonana amin'ny Light. Eritrereto rihana jiro vita amin'ny vy, tripod rafitra na hazo antsipirihany.
Table jiro tsara dia aoka ianao-miray feo ny rivotry ny efitra iray ao amin'ny fomba kokoa noho ny iray. Anao izy ireo hazavana hafa izay mila izany sady nampiany kely ihany koa ny toetra. Ny antsika dia misy amin'ny malalaka fifantenana ny fomba mba hanampy kely fanampiny loko, mihasimba sy hazavana ny home.Metal Table jiro, jiro Wood table, table USB jiro ...
Maoderina sady tsara tarehy, talantalana io Floor jiro avy tsara Light manampy vetivety fomba akory efitrano. Io jiro mahavariana miteraka manan-karena, tsara tarehy ambience, ary avo roa heny toy ny roa ahitana ambaratonga talantalana, manolotra ny tonga lafatra maneho ny toerana ho an'ny boky, vazy na sary zana-kazo. Izany azo ampiharina sy stylish talantalana tany jiro lehibe dia hijery manaraka ny seza, ambony seza na zavatra hafa sombin-fanaka ao an-trano.
Tsara Light Technology Co., LTD. naorina 2015, ary hita ao amin'ny Shenzhen.Weare mifantoka amin'ny famatsiana karazana portable Indoor jiro ho an'ny customers.Justafter herintaona, amim-pahombiazana isika hahazo ny fahatokiana mpanjifa sy ny fiderana hight withexcellent kalitao sy ny completive price.Our Mpanjifa dia tsy tany ChinaMainland, fa koa amin'ny Eoropa, Amerika ary any Atsimo Atsinanana Asia.Most ny ourcustomers efa lasa ny fifandraisana matanjaka mihitsy aza, amin'ny raharaham-barotra tsotra businesspartner ny paik'ady mpiara-miasa. Mba hihaona miaraka amin'ny customersrequirements, ka afaka nanorina ny rahalahintsika Light orinasa-Grand Champ LightingTechnology Co, LTD amin'ny Huizhou. Amin'izany fomba izany, ny vokatra amin'ny completiveprices bebe kokoa sy ny vokatra isan-karazany dia ny nampananana harena, Avy LED mpamily ny lela fanaovan-jiro LED, avy lampparts hamitana lamps.We dia ny mpamatsy ny USA Target, Walmart sy BBB.
Tamin'ny taona 2017, araka ny fepetra manycustomers, fandinihana ary isika hanaiky namany Sary orders.As amin'ny lineshopping dia tsy ho raisina tsara ihany any Shina, fa koa manerana ny world.Nowour vokatra amidy soa aman-tsara ao amin'ny Amazon sy Taobao, TMall.COM Ary JD .COM miaraka amin'ny kalitao tsara sy ny vidin-javatra, especiallyour fonosana kely dia noraisin'ny ny mpanjifa.
Tsara Light, dia yourgoodly Mifidiana sy hahatonga ny fahazavanao ho tsara!
R1120, Tiedong Park, Ping ho Road, Pinghu Street, Longgang Destric, Shenzhen, Sina, 51811
Antsoy izahay izao: + 86-0755 28684337